Tsenan’ny sainam-pirenena Zara raha mahalafo ireo mpivarotra
Miasa maina avokoa hatreto ireo mpivarotra sainam-pirenena mandehandeha.
Raha araka ny fanazavan-dRatelimanantsoa, anisan’ireo mpivarotra sainam-pirenena eny Anosy sy ny manodidina dia zara raha mahalafo izy ireo hatreto, tranga efa niainany tao anatin’ny roa taona nisesy izay. Teo alohan’izay anefa tamin’ny taona 2017 dia mahalafo sainam-pirenena 30 isan’andro izy ireo raha kely, rehefa ankatoky ny fetim-pirenena 26 jona tahaka izao. Ankehitriny, iray na roa sisa no lafo isan’andro sady mbola amin’ilay faran’izay mora ihany koa na ilay kely indrindra amin’ny vidiny 2.500 Ar no vidian’ny olona. Mahatratra hatrany amin’ny 15.000 Ar no vidin’ny sainam-pirenena iray lehibe amin’izao raha 10.000 Ar kosa ireo karazany antonony.